I-Lincolnville Beach Ferry Cottage - ukubukwa! - I-Airbnb
I-Lincolnville Beach Ferry Cottage - ukubukwa!
Lincolnville, Maine, i-United States
Indlu encane yezivakashi e-Ecofriendly enkabeni ye-Lincolnville Beach, ku-Rt 1 (umgwaqo ophithizelayo osuka eMaine uye eFlorida), iyistudiyo esinelanga (akukho amakhethini) esinombhede oyi-murphy, igumbi lokugezela eligcwele, indawo yokudlela yasekuseni (usinki/ifriji/microwave - akukho ovini, akukho stovetop) kanye nemibono emangalisayo yePenobscot Bay. Uhambo olusheshayo ukuya kwelinye lamabhishi anesihlabathi e-Maine, izindawo zokudlela, izitolo, indawo yokosa ikhofi, kanye nemakethe yendawo. Shayela amamayela ambalwa ukuya ezindleleni zokuhamba izintaba, i-Mount Battie, namadolobhana ase-Belfast, eCamden, e-Rockport + Rockland.
Iphampu yokushisa inikeza ukushisa kanye no-a/c lapho kudingeka (okungavamile kakhulu, uma kubhekwa umoya wolwandle). Ugesi uhlinzekwa yilanga - amaphaneli elanga ophahleni lwendlu enkulu akhiqiza amandla angaphezu kokwanele okuqhuba indlu nekotishi!
Ipulani eliphansi elivulekile le-cottage livumela ukukhanya okuhle kwasempumalanga - uma uvuka ekuseni, ukuphuma kwelanga ngeke kudumaze. Isiqubulo sikaMaine sithi "Dirigo", okusho ukuthi "Ngiyahola" - okubonisa ukuthi ukukhanya kwelanga njalo ekuseni kufinyelela eMaine kuqala. Asinawo ama-shades noma izimpumputhe - ngakho-ke uma ukukhanya kukukhathaza, sicela ubheke kwenye indawo.
Ungabona iziqhingi zase-Isleboro - amamayela angu-3 - futhi ufinyeleleka ngesikebhe noma nge-charter. Ikotishi lethu lingaphezulu nje kwetheminali yesikebhe futhi lihlala umphakathi ku-Route 1. Umgwaqo uba matasa ngezinye izikhathi. Kusukela kuvulandi, uzobona indawo engasemanzini esebenzayo - izikebhe zokudoba, izimoto zokuthutha, abantu abalinde isikebhe noma itekisi yamanzi.
4.89 · 177 okushiwo abanye
Ikotishi lingaphakathi kwebanga lokuhamba ukuya ogwini olunesihlabathi, izindawo zokudlela ezimbalwa, nama-pubs. Sincoma ukuthi ungene e-Green Tree Coffee & Teas kanye ne-Dot's Market futhi. Iningi lamabhizinisi endaweni ngabanikazi bendawo futhi wonke ahlinzeka ngenkonzo yamakhasimende enhle kakhulu. I-Lincolnville Beach iyindawo yasemanzini esebenzayo enezikebhe zansuku zonke eziya e-Islesboro futhi iyikhaya lemikhumbi yokudoba eminingana.
Sihlala kwamakhelwane - umkhaya wabane - ngakho ungase usibone egcekeni, sisebenza engadini, noma mhlawumbe sihlezi endaweni yethu. Siyajabula ukuxoxa nawe, ukunikeza umbono wendawo endaweni, kodwa futhi siphila kahle ngokukunikeza bonke ubumfihlo obufisayo.
Yize i-COVID-19 iseyingozi, sizogcina ibanga lethu. Sesikushilo lokho, uma udinga okuthile, sazise futhi sizosiza ukude uma kungenzeka. Uma kungenjalo, sizothatha izinyathelo zokuphepha ezifanele (ukufihla ubuso, ukuqhelelana nomphakathi) futhi sikusize mathupha.
Sihlala kwamakhelwane - umkhaya wabane - ngakho ungase usibone egcekeni, sisebenza engadini, noma mhlawumbe sihlezi endaweni yethu. Siyajabula ukuxoxa nawe, ukunikeza umbono wendaw…
Hlola ezinye izinketho ezise- Lincolnville namaphethelo